Nyochaa VR BOX 2.0, nke kacha mma dị ala iko eziokwu | Gam akporosis
Otu n'ime ngwaahịa ndị kacha sie ike n'afọ a bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, iko iko eziokwu ndị mebere anyị nke na-enye anyị ohere itinye onwe anyị n'ụzọ zuru ezu n'ụwa nke egwuregwu vidio ma ọ bụ ọbụna sinima nwere akụkụ atọ, iko dị ka ndị anyị na-egosi gị n'ime ya ezuola VR igbe BOX nyochaa, ntu Ugo ala efu nke dị oke ọnụ ala, dị ala nke ahụ Gaghị enwe ike inweta ha ihe na-erughị 16 Euro nke anyị ga-enwe ohere ịnwale ahụmịhe nke eziokwu dị adị na afọ ojuju dị elu yana ogo dị mma nke na-enweghị ihe ọ bụla ga-emere anya iko ndị ọzọ nke ụdị ahụ ọbụlagodi ọnụahịa.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ihe niile nke VR BOX 2.0 na-enye anyị, nke m bụ otu n'ime ihe kasị mma virtual eziokwu iko n'ime ya price nso, n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ị gaghị echefu vidio vidio a ebe ọ bụ na m ga-egosi gị iko iko a nke ọma n'ụzọ zuru ezu yana ịza ajụjụ maka ezigbo obi m banyere ngwaahịa a. Yabụ kedu ihe ị na-eche iji pịa «Nọgidenụ na-agụ nke a post».
Ihe mbu ekwesiri ighota bu ihe di elu nke ngwaahịa a na ihe ngosi di nma nke o ji bia na ngwugwu ya. Nke ahụ bụ otú ị dị VR igbe abụọ Ha na-abịakwute anyị ihe niile anyị chọrọ ka anyị wee bido n'àgwà dị n'eziokwu a. O yikwara ka ọ dị ịtụnanya na maka naanị 16 euro anyị nwere ike ịnweta mkpọ zuru ezu nke VR BOX 2.0 iko eziokwu dị adị nke gụnyere ndị a:
Njikwa Bluetooth - Banyere gụnyere Bluetooth dịpụrụ adịpụ, anyị nwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka ntakịrị ihu ala.
Ntuziaka mmalite ngwa ngwa.
3 Pads maka njigide ziri ezi nke smartphone na-echekwa bọtịnụ ọnụ.
2 Ngwunye nke mmiri mmiri na-ehichapụ ihicha anya nke iko nakwa ihuenyo nke Smartphone anyị.
1 Anti-ájá na mgbochi ọkọ akwa hichapụ maka nhicha anya m na ihuenyo nke Smartphone.
2 3M mmado ihe mmado.
Umegbe iko iji chebe anya m si uzuzu nakwa na ha nwekwara ọrụ maka nzacha ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ka ike gwụrụ nke ọma mgbe ị na-eji iko ndị a na-ahụ anya eme ihe dị obere.
1 Nzube na ihe owuwu nke VR BOX 2.0 iko eziokwu mebere
2 Onye na-ahụ maka ntanetị site na Bluetooth nke VR BOX 2.0
3 M smartphone m ga-adaba na VR BOX 2.0?
4 Okwu Editor:
4.3 Pịa ebe a iji zụta ha na Amazon na ọnụahịa kacha mma
Nzube na ihe owuwu nke VR BOX 2.0 iko eziokwu mebere
na VR igbe abụọ Ha bụ ezigbo iko eziokwu na usoro nke mputa ha nwere ike ịgafe nke ọma iko ọla edo nke Samsung VR Gear ma ọ bụ Gear VR, na ahịrị na ogo dị elu na-emecha atụmatụ ahụ maka nkasi obi kachasị na iji ha.
VR BOX 2.0 bụ plastik, polycarbonate dị elu na padded ebe ke akụkụ na-emetụ anyị ihu izere kpọmkwem esemokwu megide plastic ma si otú zere ọkọ ma ọ bụ akara si na iji nke gadget, si otú na-enye anyị a obi nke nkasi obi nke anyị ga-fọrọ nke nta echefu na anyị na-yi ha.
Ya fasteners arịlịka gadget na isi nwere atọ arịlịka isi. na isi abụọ nke isi na n'elu. ịhapụ.
N'otu aka ahụ, ime akara ma ọ bụ Bluetoot njikwa imeh nwere ihe mara mma nke nwere ọ joụ na ọtụtụ bọtịnụ, ọ bụ ezie na dịka m ga-agwa gị ntakịrị n'okpuru na ngalaba akọwapụtara, ma ihe owuwu ihe na arụmọrụ ha na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ.
Onye na-ahụ maka ntanetị site na Bluetooth nke VR BOX 2.0
O doro anya ihe kachasị njọ nke iko efu ndị a dị ala, ma ọ bụ na njikwa ntanetị ma ọ bụ njikwa Bluetooth dị ka ọystụ nke na-abịa na VR BOX 2.0, ma e wezụga ka e jiri ihe plastik dị oke mma wuru ya, nke mere na ihe mkpuchi azụ nke batrị na naanị di na nwunye Mgbe ụfọdụ adịghị emechi nke ọma, n'ọtụtụ egwuregwu VR nke m gbalịrị na njedebe gam akporo m, ọ ga-abụ naanị njikwa olu dị mfe na ịhapụ ụzọ egwuregwu ụfọdụ.
Ya mere enwere m ike ikwu nke ahụ ọystụ nke na-abịa na VR BOX 2.0 abaghị uru ọ bụla ebe ọ bụ na ọ gaghị aba uru ihe ọ bụla nke ihe anyị na-atụ anya n'aka onye na-achịkwa egwuregwu dịpụrụ adịpụ.
M smartphone m ga-adaba na VR BOX 2.0?
na VR BOX 2.0 dakọtara na gam akporo smartphones sitere na 4,5 ″ ruo 5,7 ″, ọ bụ ezie na ị ga-mkpa izute ụfọdụ oru chọrọ dị ka nwere gyro na accelerometer iji chọpụta ma kọwaa mmegharị nke isi anyị.
Na mgbakwunye na nke a na ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe dị mkpa achọrọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ezigbo mmikpu na ahụmịhe mara mma na egwuregwu na ihe nkiri, ga-achọ smartphone nwere ihuenyo nwere mkpebi kacha nta nke FullHD ma ọ bụ karịa.
VR igbe abụọ
Ezigbo ihe na ihe owuwu
atọ n'ikwekọ ihe
Ha na-etinye iko dị nro na-acha ọkụ ọkụ
Unusable Bluetooth njikwa
Pịa ebe a iji zụta ha na Amazon na ọnụahịa kacha mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyochaa VR BOX 2.0, anyị nwalere iko kacha mma dị ala dị ala
Nwere ike ịzụta njikwa ọzọ nke kwekọrọ na iko?
Enwere ike iji njikwa maka egwuregwu, ọ bụghị naanị olu.
Ozugbo etinyere ya na ekwentị anyị, na ịpị ma jide bọtịnụ na akara akara + + C maka sekọnd ole na ole, ọ na-abanye n'ime egwuregwu GAME.
Anyị ga-achọpụta nke a n'ihi na anyị nwere ike ịgafe na akara ngosi na desktọọpụ smartphone na mkpisi njikwa.
Buru n'uche na ọ bụghị egwuregwu VR niile na-akwado iji njikwa. Mana iji nwalee ya m kwadoro Fantasy VR egwuregwu.
Faryd Ortiz dijo
N'ihi na ndị ọzọ na-ere na-eji akara ojii na obere bọtịnụ. Kedu ihe dị iche, ha dị obere?
Zaghachi Faryd ortiz
Javier Alvarez nwere ebe obibi dijo
ịzụta ihe VOS dị ka ihe nlereanya nke egosiri na post a, yana ọdịiche kachasị na ọ nwere oghere n'ihu, m ga-achọ ịma ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka ... Daalụ
Zaghachi Javier Alvarez
A ngwa ngwa alo dakọtara na ekwentị Huawei P10